Modern imishini ukudonsa eyenzelwe ukusebenza Owengeziwe kanye nokusebenza. Le ndlela ivumela ukuba ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende kusukela izingxenye ezahlukene, kube kugcinwe ibhalansi elikhulu e ezibekiweko lobuchwepheshe. Nokho, imikhiqizo enemisebenzi kule niche akuyona njalo senalungisiswa ukusebenza, ngakho ingxenye enkulu abakhiqizi namanje libabiza ngokucacile amayunithi ngekwetinhloso letehlukene. futha okunjalo osebenza Espa, kuboniswe ukuhlukahluka eziningana ukusebenza kwesakhiwo.
Imikhiqizo yalesi umugqa ingasetshenziswa ukuhlukana umswakama umhlabathi, bethulula imigodi futhi zewayini kusukela amanzi, kanye nokwenza ezinye imisebenzi yalolu hlobo. Ngesisekelo imikhakha amelela onobuhle Vigila umndeni. Abamele leli qembu ziyehluka ukuphakama futhi nokuphakamisa umthamo. Ikakhulukazi, ezingeni kokuqala imelelwa ukuguqulwa 50-500, okuyinto ikwazi ukumpompa 15 m 3 / h endaweni ka-4 m ukujula. A ziphumelele nakakhulu futha ngwenya Espa SS ukubulawa ivumela ihora ukukhipha oda 16 m 3. Kulokhu ukuphakama ephakamisa kuyinto 8 m. Ngo ekilasini efanayo ingashiwo centrifugal vortex lokubolekwa design enikeza amandla okusezingeni eliphezulu isondo Vortex. Nakuba onobuhle ukusebenza ezifana zekhava eziyisisekelo zihlukaniswa ukumelana odla nokulawula tech uhlelo.
Ukusakazwa futha Espa
Uma Vigila uchungechunge igxile ikhambi kwezinkinga zezomnotho ngaphakathi engadini nokwakhiwa umsebenzi, amamodeli kwegazi zisiza enhlanganweni zokuxhumana. Nge amaphampu ka NMT imigqa, RSAN, NMTD kanye RA ungazakhela khona ukuthi amanzi eziyinkimbinkimbi, indle, futhi enze imisebenzi ehambisana ne-obandayo Ukushisa inhlangano. Iwuhlelo Espa kwegazi futha uhlobo iyunithi wokubacindezela nge izixazululo eziphambili. Onjiniyela esihlose ezifana onobuhle eziningi ukudonsa izindlela nge support for ukulawula imvamisa. Ngo RSAN umndeni, eyenzelwe izidingo amanzi sasendlini, umnakekeli ukunakekelwa okukhethekile ikhokhelwa ukwakhiwa of indaba umzimba. Ukuze ukwazi ukuphuza isakhiwo service amanzi senziwa enomzimba zethusi okungukuthi nobungane eqinile futhi kwemvelo.
Assemblies lolu hlobo futhi enze kube nokwenzeka ukuba amanzi ahlanzekile, okuvumela inclusions benezinto ratio 50 g / m 3. imishini enjalo kungaba kuhlanganiswe ku amanethiwekhi okuxhumana, ukuhlela ngosizo lwabo, ukuchelela izinhlelo, kodwa injongo eyinhloko yalesi imishini ukukhulisa amanzi ekujuleni ezinkulu. Okungukuthi, umsebenzisi kanyekanye ukukhipha yenethiwekhi futhi abaqondise ukuba umthengi. Ikakhulukazi, Espa ethandwa iphampa ngoba imithombo, emelelwa uchungechunge Acuapres. Lokhu ukufakwa banezimfanelo uhlelo lokulawula ehlangene. I-opharetha ungabheka umphini tetinkhombamagama control. Babecwiliswa ukujula onobuhle ezifana imayelana 50 m, kodwa ukusebenza akuyona njengoba umxhwele njengokungathi amanzi amayunithi - ihora alenzanga ezingaphezu kuka 4 m 3. ukwehla okunjalo abukhali ngenxa umthelela ngokunembile amandla adingekayo kuphela ukuze siphakamise imitha-50 ukuphakama. Nokho, ungathola izinkomba ephakeme uma kunesidingo. Ngakho, Tecnopres umndeni amaphampu vumela akhishwa ihora 6.5 m3 ngayinye.
Abanikazi Espa uzotshala imishini ingxenye enkulu adunyiswe mikhiqizo, wokugubha futhi elilungile amandla ukusebenza eziphambili isofthiwe ukusebenza. Endaweni ehlukile, ke ugcizelela Ergonomics of ukufaka ezinjalo, nokukhuthazela okusezingeni eliphezulu. Nokugcinwa nokulungiswa amaphampu Espa ngokuvamile kuhilela esikhundleni izakhi olufanelekayo amanzi, kuhlanganise nokufakwa, couplings, adapters, kanye nezinye izingxenye. Ezinye izindaba zika-isakhiwo akakubangeli izinkinga - abaningi bathi ukuthembeka inhlangano izindlu kanye izingxenye ezihlobene. Kepha Ergonomics, ngisho esigabeni maphakathi iqukethe lokubolekwa eziye ihlanganiswe othomathikhi indawo elawula uhlelo. Ngokusho abasebenzisi, amakhono ukulungiswa kulezi amadivayisi uhambisane ezingeni agcwele ukudonsa esiteshini.
Okuvame kakhulu inguqulo ethulwa amanzi amaphampu, kulinganiselwa ngaso ayizinkulungwane 15-20. Hlikihla. kuye ngokuthi ukuguqulwa. Ezingeni efanayo kukhona imikhiqizo kwegazi hlobo. Nokho, njengoba ukunwetshwa ukusebenza kanye nezindleko iyakhula. Ngakho, kungaba multistage amayunithi ngwenya uthenge kakade for abayizinkulungwane 50-70. Lo eqolo kukhona mpo multistage imishini centrifugal hlobo. Lokhu Espa iphampa, intengo okungase idlule ayizinkulungwane 100. Hlikihla. Kuyaphawuleka ukuthi esiteshini isethi ephelele azibizi kuqhathaniswa nabalingani kusukela mncintiswano. Isilinganiso amandla eziyinkimbinkimbi angathengwa ayizinkulungwane 50-60. Athuthukisiwe ngaphezulu ngokuya ubuchwepheshe izinhlelo ziyatholakala 80-100 ayizinkulungwane., Kodwa ngamakhasimende izixazululo ukuze isetshenziswe lochwepheshe.
Espa abaklami design yabo ozama ukuthuthukisa umqondo jikelele, kodwa ngesikhathi esifanayo, nokwethenjelwa kanye nokusebenza kwe-futha, elikwaziyo ukuxazulula imisebenzi ethize. Akuwona wonke imodeli kungenziwa ngokuthi okungcono, ngokuya zokusebenza emikhakheni ehlukahlukene, kodwa uchungechunge ezahlukene design elungiselelwe, efanelekayo anhlobonhlobo imisebenzi. Ngokwesibonelo, ezijulile Espa futha ingasetshenziswa cishe kuzo zonke izindawo ezidinga ephakamisa amanzi ukuze ukuphakama mayelana 50 m. Ngaphambili, umsebenzi zalamaqembu.I lwalulinganiselwe kuphela ukuthi siphakamise yenethiwekhi, ngemiklamo yesimanje imishini ubhekana kahle ukusatshalaliswa yayo futhi nezelani abathengi. Enye into ukuthi inqubo ukuqaliswa izigaba eziningana ukusebenza ukusebenza lehla kakhulu. Labo ungafuni ukudlala kule inkomba, watusa imodeli multistage, lapho ISIZINDA ngabanye ukwenza imisebenzi ethile, elilungile umthwalo ukwabelana kanye nokugcina amandla ingcindezi.
Angle grinders nge RPM adjustable: Izibuyekezo ikhasimende
I-Krasnodar Territory, Ashe: umkhakha wangasese. Izithombe, amanani nezibuyekezo
Umhluzi ekwelapheni oats isibindi
Indlela yokujwayela ikati eya emathini yilelo msebenzi obalulekile wezinsuku zokuqala zokuphila.
-hemoglobin ephakeme ezinganeni. -hemoglobin ephakeme - kusho ukuthini?